Afarta qaab ee ugu waxtarka badan B4B Mawduucyada? | Martech Zone
4-ta Foom ee ugu wax ku oolka badan B2B?
Lama yaabin natiijooyinka Warbixinta Qiimaynta Suuqgeynta Mawduuca 2015. Waxaan u wareejinay ku dhowaad dhammaan diiradeena kordhinta saamiga suuqa, wacyigelinta sumcadda iyo ku habboonaanta beddelaadda ee maamulka nuxurka in aan u horumarinayno macaamiisheenna. Ku Foomamka Mawduucyada Sare ee Suuqgeynta B2B waxay kala yihiin:
Studies Case - Marka laga reebo kor u qaadista magacaaga, daraasad kiis waxay bixisaa habab wax ku ool ah oo looga sheekeysto sheeko ku saabsan macaamil kaas oo iska diiwaangelin doona himilooyinka kale ee la midka ah warshadaha ama la kulmaya caqabad la mid ah Daraasadaha kiisku waxay bixiyaan dhinac kasta oo ka mid ah waxyaabaha waaweyn - oo ay ku jiraan sheekada, xogta taageerta, muuqaalka wax soo saarka ama adeegga, markhaati, iyo sidoo kale wicitaanka ficilka.
videos - Fiidiyowgu wuxuu u dhigmaa 1.8 milyan oo erey. Tani waxay ahayd hadal geesinimo leh oo ka soo baxay daraasaddiisa Dr. James McQuivey ee Forrester Sidee Fiidiyowgu ula wareegi doonaa adduunka. Awoodda isdiiwaangalinta dhaqdhaqaaqa iyo aragga isla mar ahaantaana lagu sharaxo iyadoo la adeegsanayo dhawaaqa waxay kaa caawineysaa sharaxaadda iyo sharraxaadda si ka sarreeysa qoraalka maqaalka ama sawirka. Fiidiyowyadu maahan dadka caajiska inay akhriyaan… waxaa loogu talagalay dadka doonaya inay si dhakhso leh u xafidaan una fahmaan macluumaad dheeri ah.
Whitepapers - Haddii macaamiishayada ujeeddadeedu tahay inay la macaamilaan dhagaystayaasha, waa inay gacan ka geystaan ​​waxbarista iyaga sidoo kale. Waraaqaha cad ayaa si isku mar ah u wargaliya oo wax u baray akhristaha iyaga oo sidoo kale u aasaasaya shirkaddaada inay tahay awoodda mawduuca. Marka loo arko inay tahay hay'ad waxay abuureysaa kalsooni iyo aaminaad waxay keentaa beddelaad.
Infographics - Kani waa istiraatiijiyaddeenna istiraatiijiyadeed ee loogu talagalay macmiil kasta oo sii wadaya kaliya in uu bixiyo waxtarka macaashka marar badan iyo in ka badan Sida aan u aragno macmiil isku dayaya inuu dhiso wacyigelin iyo meeleyn raadin dabiici ah, ma jirto istiraatiijiyad ka shaqeysay sidaan barnaamijyada infographic. Waxaan daawaneynaa shirkado badan oo ku dhacaya wejigooda… iyagoo kaliya ku burburinaaya tirooyinka qaar qaab quruxsan, laakiin markaad sheekada farsameyso, aruuriso cilmi baarista, oo aad sameysato infographic ka caawiya hagida dareenka daawadayaasha oo ka caawiya iyaga inay kala fur furaan arrin, ma jiro qaab ka fiican. Infographics waa la qaadi karaa… way fududahay in la raaciyo lana wadaago meel walba. Kani waa ubadkeenii!
Shirkado badan ayaa ku dhaca shoog istiraatiijiyad ah kharashka ku baxa waxyaabaha aasaasiga ah. Waa sababta aan uga caawinno iyaga inay dib u soo celiyaan nashqadaha u dhexeeya qaabab iyo sidoo kale inaan macaamiisheenna u soo celino hantida. Hal warqad oo macluumaad iyo caddaan ah ama daraasad kiis ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu xoojiyo buug-yaraha, bandhigyada iibka, sawirrada websaydhka, qoraallada baloogyada, Podcasts, webinars… iyo in ka badan. Haddii aadan dib u soo celin mawduucan, ma ogaanaysid kartidiisa buuxda. Hadana hadaadan isticmaaleynin gabi ahaanba, waxaad ka dambeeysaa kuwa kula tartamaya ee sidaas sameeya.
The Warbixinta Qiimaynta Suuqgeynta Macluumaadka 2015 waxay bixisaa falanqeyn casri ah oo ku saabsan isbeddelada ugu waaweyn ee suuqgeynta ururada ee B2B, waxayna ku saleysan tahay mashruuc cilmi baaris gaar ah oo lagu fulinayo iskaashi Cilmi-baarista Goobaha Bishii Meey / Juun 2015.
Halkan waxaa ku yaal teaser weyn oo is-dhexgal ah Suuqgeynta B2B waa la isku keenay (waxaad ku dhufan kartaa badhanka shaashadda oo buuxa si aad si fudud ula fal gasho):
Oo halkan waxaa ku yaal faahfaahinta xeeladaha ugu sarreeya ee B2B iyo qaar ka mid ah macluumaadka taageeraya:
Tags: 2015suuqgeynta b2bdaraasadobaaritaanka goobaabintaWarbixinta Qiimaynta Suuqgeynta Mawduucabuug fliprog nuxurkasawiro muuqaal ahMacluumaadka Suuqgeyntaturtlvideoswhitepapers
Qiimaha Sare ee Fashilka Naqshadaynta Websaydhka ayaa aad u badan